i-Australia iqede i-Test yokuqala emabholeni angu-22
i-Australia idinge amabhola angu-22 nemizuzu engu-20 emdlalweni ukuqeda umdlalo wokuqala we-Sunfoil Test bedlala nama-Standard Bank Proteas e-Sahara Stadium Kingsmead ngoMsombuluko ekuseni. Banqoba ngama-runs angu-118.
u-Quinton de Kock (83 off 149 balls, 11 fours) no-Morne Morkel banezezele ngama-runs amahlanu kumphumela ngaphambi kokuthi u-Josh Hazlewood akhiphe u-De Kock nge-lbw ukwesekela u-Mitchell Starc (4/75 bese emdlalweni wathola u-9/109) no-3/61.
u-Starc uqokwe njenge-Sunfoil Man of the Match. Ngaphandle kokuphoxa ngokushaya kwama-Proteas kwi-innings yokuqala kube umehluko obalulekile phakathi kwawo womabili amaqembu kube ukushaya kwangezansi. i-Australia ikwaze ukuhlanganisa ama-runs angu-100 kuma-wicket amathathu okungcina kwi-innings yokuqala kwathi u-Starc wakhipha abashaya ngasekugcineni be-South Africa kuwona womabili ama-innings.
Ikhulu lika-Aiden Markram kwi-innings yesibili kumenze waba umdlali wesine we-South Africa othole ikhulu lakhe lokuqala le-Test edlala ne-Australia. Ulandela u-Eddie Barlow, u-Jacques Kallis, u-Jacques Rudolph nokapteni wamanje u-Faf du Plessis ukuthola lomklomelo.
i-Sunfoil Education Trust (SET) ithole imali efike ku-R254 000 kuma-boundaries no-six abashayiwe kanye nama-wicket akhishwe.
Umdlalo we-Test wesibili uzoqala e-St. George’s Park, e-Port Elizabeth ngoLwesihlanu.
u-Faf udumele kodwa uyaziqhenya ekulweni kweqembu u-Starc onengozi usondeza i-Australia ekunqobeni emuva kwekhulu lika-Markram u-Maharaj uthole ama-wicket abalulekile kumdlalo wakhe wokuqala e-Kingsmead Ama-Proteas ne-Australia balungiselela ukuqhubeka nempi yabo yekhilikithi u-Morkel uzothatha umhlalaphansi kwikhilikithi yamazwe emuva kwi-series ne-Australia u-Cummins uyaqhakaza ngokushaya kanye nokuphosa Isimo sama-Proteas alimele